Siyaasiyiin ka digay in laga faa?iidaysto khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda Soomaaliya – Radio Daljir
Nofeembar 18, 2013 8:31 b 0
Qahira, November 18, 2013 – Khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya gaar ahaan ra?isal wasaaraha iyo madaxweynaha dalka ayaa sii kordhaya, xili aan weli xal laga gaarin waxyaabaha la isku hayo, balse waxaa baaqyo kala duwan jeedinaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida.
Siyaasiyiinta waa wayn ee Soomaalida ayaa ku baaqay in arrintan hoos loo dhigo, Madaxweynihii hore ee dalka Dr. Cabdulqaasim Salaad Xasan oo ku sugan Qaahira ayaa walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya ra?isal wasaaraha iyo madaxweynaha.
Waxaa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ka warsugayeen dowlad awood badan oo ka hanaqaada wadanka 22 sano kadib, in kastoo isbedel kadib haddana uu soo baxayo khilaaf u dhexeeya dowaldda, arrintaas ayuu ku tilmaamay nasiib xumo.
?Waxaan leeyahay masuuliyiinta yaan laga faa?iidaysan khilaafkiina, dadka Soomaaliyeed waxay sugayaan rajada wadanka iyo soo kabashada.? Ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan.
Waxaa uu sheegay in ay jiraan dad diidan hanaqaadka dowladda hadda dalka ka jirta isla markaasna doonaya in ay cagaha u laabahaan mustaqbalka dalka.
?dadku waxay filayeen in laga baxay khilaaf iyo isqabqabsi dhowr iyo labbaatan sano kadib.? Dr. Qaasim waxaa uu walaac ka muujiyey hadii uu sii socdo khilaafka u dhexeeya labbada masuul.?Madaxda dowladda waxaan kula talin lahaa in ay iyagu heshiiyaan.?
Madaxweyne xasan sheikh Maxamuud ayaa ra?isal wasaare saacid ka dalbaday in uu is casilo toddobaadkii hore, balse wixii xilligaas ka dambeeyey waxaa cirka gaaray khilaafka u dhexeeya labbada masuul, si dhaba looma ogga waxyaabaha la isku hayo marka laga yimaado keenista wasiiradda cusub.
Puntland oo xabsiga dhigtay ajinebi ku eedaysan Khayraad arruursi iyo falal basaasnimo (Dhegeyso)